NUG အစိုးရအပေါ် အပြစ်ပြောနေသူများကို “နှစ်ဖက်စလုံးက အခြေအနေကို သိနေသူဆိုရင် ပိုပြောရခက်တယ်” ဆိုပြီး အခြေအနေတရပ်ကိုရှင်းပြလာတဲ့ ပန်ဆယ်လို – Myanmar Media
NUG အစိုးရအပေါ် အပြစ်ပြောနေသူများကို “နှစ်ဖက်စလုံးက အခြေအနေကို သိနေသူဆိုရင် ပိုပြောရခက်တယ်” ဆိုပြီး အခြေအနေတရပ်ကိုရှင်းပြလာတဲ့ ပန်ဆယ်လို
တစ်ဖက်တည်းက မှားနေတဲ့ကိစ္စတွေက ပြသနာမရှိဘူး။ နှစ်ဖက်စလုံးမှန်နေတဲ့ ကိစ္စမျိုးတွေကျ ဖြေရှင်းရခက်တယ်။ နှစ်ဖက်စလုံးက အခြေအနေကို သိနေသူဆိုရင် ပိုပြောရခက်တယ်။
၁၁ လတာကာလကြာလာတာနဲ့အမျှ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးမှာ ရူးမတတ်လိုချင်လာတာသည် လက်နက်ဖြစ်လာတယ်။ အခုလို တစ်ဖက်က ဖိလာတဲ့အချိန်မှာ ခံပြင်းဒေါသတွေက စကစအပေါ် မဟုတ်ဘဲ NUG ပေါ် ကျလာတယ်။
NUG သည် တော်လှန်ရေးရဲ့ တပ်ဦးဖြစ်တာနဲ့အမျှ လက်နက်ရအောင် လုပ်ဆောင်ပေးရမယ့်တာဝန် ရှိကိုရှိတယ်။ အခုလိုအချိန်မှာ NUG က လက်နက်ပြည့်စုံအောင် ထောက်ပံ့မပေးနိုင်သေးတဲ့အပေါ်မှာ ဝေဖန်မှုတွေ မြင့်တက်လာတာကြောင့် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးရည်မွန်ကိုယ်တိုင် ပိုစ့်တင်ဖြေရှင်းလာရတယ်။
PDF တွေ၊ LDF တွေဘက်က လက်နက်လိုအပ်မှုကိုလည်း PDFတွေနဲ့ နေ့တိုင်းစကားပြောနေရတဲ့ Supporter တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကောင်းကောင်းနားလည်တယ်။ NUG ဘက်က အခက်အခဲကိုလည်း ငွေစီမံရသူ ဘဝတူချင်းမို့ နားလည်တယ်။
Third Party တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပြောပြပါရစေ။ NUG က လက်နက်ပြည့်စုံအောင် မထောက်ပံ့နိုင်တဲ့အပေါ်မှာ အပြစ်မြင်ကြတာ လက်ခံတယ်။ ဒါပေမယ့် NUG ရဲ့ ကောက်ခံရရှိငွေကို တစ်ချက်လောက် တွက်ကြည့်ကြရအောင်။
တော်လှန်ရေး အစပိုင်းမှာ Go Fund Me ကတဆင့် ကောက်ခံရရှိငွေ ဒေါ်လာ ၉သန်း၊5Millions Challenge ကနေ ကောက်ခံရရှိငွေ ဒေါ်လာ ၆ သန်းဝန်းကျင်၊
နွေဦးထီ NUG Bond (ဘဏ်အခက်အခဲကြောင့်ရပ်ထားရ၊ ပြန်လွှဲပေးရ) လွန်ရောကျွံရော ဒေါ်လာ ၁၀ သန်း၊ NUG ရဲ့ Official Fund Raiser တွေဆီကတဆင့် ရရှိငွေ ဒေါ်လာ ၄ သန်းဝန်းကျင်။ ကဲ…. အခြား ဘာရှိသေးလဲ၊ ဒါပဲ။
နောက်တစ်ခုက စာရွက်အဝါကြီးနဲ့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန Letter Head ကြီးနဲ့ ဦးရည်မွန်လက်မှတ်ထိုးထုတ်ပေးနေတဲ့ အလှူငွေ မှတ်တမ်းတွေဟာ NUG က ရတဲ့ငွေမဟုတ်ပါဘူး။
PDF တွေဆီ တိုက်ရိုက်ပို့ပြီး ကာကွယ်ရေးက အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက် ဝန်ကြီးက ခေါင်းခံပေးတဲ့ သဘောပါ။ ကိုယ်တင်တင်နေတဲ့ ဦးရည်မွန်လက်မှတ်နဲ့ အလှူငွေမှတ်တမ်းတွေဟာ PDF တွေဆီ တိုက်ရိုက်ပို့နေတာမို့ NUG ဘဏ်အကောင့်ထဲ ရောက်သွားတာ တစ်ခါမှ မရှိတာ ကိုယ်တွေ့ပါ။
အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၉ သန်း။ ဒါက NUG နာမည်နဲ့ ကောက်ခံရရှိငွေ။ ထားပါ…. ကိုယ်က ကိန်းဂဏန်းအတိအကျ မရနိုင်တဲ့အတွက် ပိုရတယ်လို့ထားပြီး နှစ်ဆနီးပါး တိုးတွက်လိုက်ဦး။ ဒေါ်လာ သန်း၅၀။ အဲ့ထက်မပိုနိုင်ပါဘူး။
ပုံမှန်အစိုးရတစ်ရပ်အနေနဲ့ ဒေါ်လာသန်း၅၀ ဆိုတာ အတော်ကို နည်းပါးတဲ့ပမာဏပါ။ အခုလို တော်လှန်ရေးအစိုးရတစ်ရပ်၊ အထူးသဖြင့် ငွေကုန်ကြေးကျ များလွန်းလှတဲ့ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးကို ဆင်နွှဲနေရတဲ့ အစိုးရတစ်ရပ် ဘယ်လောက်နည်းပါးတဲ့ ပမာဏလဲဆိုတာ တွက်ဆကြည့်ပါ။
ဒီပမာဏဆိုတာ လက်ရှိစစ်ကောင်စီက ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုကို ချပေးနေတဲ့ ဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့ ဘက်ဂျက်တွေရဲ့ ပမာဏ အစွန်းထွက်ပဲ ရှိတယ်။ မင်းအောင်လှိုင် စစ်တပ်အတွက် သုံးနေတဲ့ ပမာဏနဲ့ ယှဉ်ရင် ဘယ်လောက်ကွာဟနေမလဲ စိတ်မှန်းနဲ့ တွက်ကြည့်ရင်ကို အလွယ်လေး သိနိုင်တယ်။
ဒီအခြေအနေကြားထဲက ၆လဝန်းကျင်ကာလမှာ ဒီအခြေအနေထိ ဖြစ်လာတဲ့ တော်လှန်ရေးမှာ အစိုးရရော ပြည်သူတွေရော ဘယ်လောက်ကြိုးစားခဲ့လဲဆိုတာ သိသာထင်ရှားပါတယ်။ လက်နက်နည်းပါးတယ်၊ နည်းပါးတယ်ဆိုပေမယ့် MWD, MRTV မှာ ဖမ်းဆီးမိတယ်လို့ ပြသွားတဲ့ လက်နက်တွေရဲ့ ခေတ်မီလက်နက်ဖြစ်မှုနဲ့ တန်ကြေးကို မြင်နိုင်ပါတယ်။
မြေပြင်က လူငယ်တွေ လက်နက်မရကြဘူး။ ကိုယ့်ဖာသာ လုပ်နေရတယ်။ မှန်ပါတယ်… သိပါတယ်။ အဲ့အပိုင်းကို ကိုယ်အတော်လေး သိပါတယ်။ နေ့တိုင်း ကြားသိနေရတဲ့ အသံတွေပါ။ ဒါကြောင့် နိုင်ရာနေရာကနေ LDFတွေ၊ PDF တွေကို ထောက်ပို့လုပ်နေတာပါ။ ဒါပေမယ့် လုံးဝမရကြတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ရသူတွေက မရသူတွေလို ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်တော့ တက်မရေးကြတာ ပါတာပေါ့။
NUG က မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကို ဘယ်ရွေ့ဘယ်မျှ ညှိနှိုင်းထောက်ပို့နေတယ်။ လက်နက်ထုတ်လုပ်ရေးအတွက် ဘယ်လိုဘယ်ပုံ အသုံးပြုနေတယ်။ ဘယ်နှလက် ဘယ်ကိုပို့တယ်။ ဘယ်လောက် ဘယ်ကိုပို့တယ်။ ဒါတွေဟာ စစ်ရေးသဘောတရားအရ အပြင်ထွက်လို့ကို မရတဲ့ အချက်အလက်တွေ။
အခုအချိန်မှာ PDF အဖွဲ့ပေါင်း ထောင်ဂဏန်းနီးနီးလောက် ရှိပါတယ်။ PDF, ပကဖ၊ UG ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ အဖွဲ့တွေ မနည်းမနောပါပဲ။ NUG အနေနဲ့ ဒီအဖွဲ့အားလုံးကို မထောက်ပံ့နိုင်ပါဘူး။ NUG က ကိုယ်အခုတင်နေသလို ဘယ်အဖွဲ့ ဘယ်လောက်ပို့ထားပါတယ် အလှူရှင်တွေ စိတ်ကျေနပ်အောင် တင်လိုက်ရင် ရတဲ့အဖွဲ့တွေက ပြသနာမရှိပေမယ့် မရတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့ မကျေနပ်မှုဟာ အခုထက် အခုထက် အဆပေါင်းများစွာ ကြီးထွားလာနိုင်ပါတယ်။ NUG မပြောနဲ့ ကိုယ်လိုပမွှားတောင် အဲ့လိုပြသနာတွေကို အများကြီး အတွင်းကြိတ်ရင်ဆိုင်နေရတာပါ။
ဒေါ်လာ သန်းချီဆိုတာ လူတစ်ယောက်အတွက် အရမ်းများတဲ့ ပမာဏပါ။ ဒါပေမယ့် လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးဆင်နွှဲနေရတဲ့ အစိုးရတစ်ရပ်အတွက် များပြားလွန်းတဲ့ ပမာဏ မဟုတ်ပါဘူး။ လူတစ်ယောက်နဲ့ အစိုးရတစ်ရပ် ရပ်တည်ရပုံမတူတဲ့အတွက် တိုင်းတဲ့ပေတံ တူလို့မရပါဘူး။
NUG ဟာ ပြည်သူ့အထောက်အပံ့ တစ်ခုတည်းနဲ့ ရပ်တည်နေရတဲ့ အစိုးရပါ။ မင်းအောင်လှိုင်နေရာက တွေးကြည့်ရင် ဖမ်းမရတဲ့ NUG ကို အပြုတ်ဆော်ဖို့က တစ်လမ်းပဲ ရှိပါတယ်။ ပြည်သူပဲ ရှိတဲ့ NUG ကို ပြည်သူမရှိအောင် လုပ်တာမျိုးပါပဲ။
အခု ဝေဖန်ထောက်ပြ၊ အချို့ ဆဲဆိုနေကြသူတွေကို စကစရဲ့ ဒလန်လို့ စွတ်စွဲတာ မဟုတ်ဘူးနော်။ သူတို့ဟာ တကယ်လိုအပ်နေလို့ဆိုတာ နားလည်တယ်။ စကစက NUG အဆင်သင့်မဖြစ်သေးခင်မှာ ဗျူဟာကျကျ အခုလို အရမ်းလိုအပ်နေတဲ့ အခြေအနေဖြစ်အောင် တွန်းပို့လိုက်တာပါပဲ။
ရန်သူခင်းပေးတဲ့ လမ်းကို လျှောက်ကြမလား။ ရန်သူ့ဘီလူးဆိုင်းနဲ့ ဘီလူးက ကကြတော့မလား။ ၈၈ က စောက်ချိုးမျိုး ၂၁ မှာ လာမချိုးနဲ့လို့ အော်ခဲ့ကြတယ်မလား။ ၂၁ အင်အားစုတွေဟာ ဥာဏ်ရည်မြင့် စမတ်ကျကြောင်း ပြသရမယ့် အခြေအနေပါ။
NUG အနေနဲ့ PDF တွေရဲ့ လိုလားချက်၊ ပြည်သူတွေရဲ့ အားမလိုအားမရဖြစ်မှုကို ကောင်းကောင်းကြီး သိနေပြီး Accountability ရှိရှိ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ဖို့ ရှိမယ်ဆိုတာ မနေ့က ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးရဲ့ ဖြေရှင်းမှုကို ကြည့်ရင် သိနိုင်မယ်ထင်တယ်။ ဒီ့ထက်ပိုပြီး ကျေနပ်လောက်တဲ့ ဖြေရှင်းမှုတွေ၊ ရလဒ်တွေကို ပေးစွမ်းနိုင်မယ်လို့လည်း မျှော်လင့်ပါတယ်။
NUG ကို လှူရင် PDF ဆီမရောက်ဘူးဆိုတဲ့ Narration ဟာ မရှိဘူးဆို နှစ်လလောက်ရှိပါပြီ။ ဒီ Narration ကို ကိုယ့်ဘက်က လူတွေကပဲ Emotional အရ ဟိုဘက်အကြိုက်လုပ်ပေးနေသလို ဖြစ်နေတော့တာပဲ။
NUG ကို လှူရင် PDF ဆီ မရောက်ဘူးဆိုပြီး NUG ကို မလှူကြဘူး။ NUG ကို မလှူတော့ NUG ကနေ PDF ဆီ ဘယ်လိုရောက်နိုင်တော့မလဲ။ မရောက်တော့လည်း မရောက်ရကောင်းလား ဆဲမှာပဲ။ ဒီအတိုင်း ဆက်သွားပြီး ဒီ Narration ကြီး ခိုင်မာသွားရင် သေချာတာတော့ NUG ဆိုတဲ့ တပ်ဦးကျိုးမှာပဲ။
နိုင်အောင် တိုက်ကြမှာ မဟုတ်လား။ သွေးအေးရင် ခွင့်မလွှတ်ကြေးလို့ ကြွေးကြော်ထားကြဖူးတယ် မဟုတ်လား။ ခက်ခဲမှန်း သိပေမယ့် စစ်ကျွန်မခံဘူးဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ မာန်တင်းရှေ့ဆက်ခဲ့ကြတယ်မလား။
ဒီအခြေအနေထိ ကျော်ဖြတ်လာနိုင်ခဲ့ပြီပဲ။ ဘယ်ကောင်သေရဲလဲ မေးခံခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကနေ ပြည်သူရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်မှာ ဘယ်ကောင်ရပ်ရဲလဲ ပြန်မေးနိုင်တဲ့ အခြေအနေထိ ရောက်လာခဲ့နိုင်ကြပြီမဟုတ်လား။ အားတင်းထားကြစမ်းပါ။
ဒီလိုပဲ ငြင်းကြ၊ ခုန်ကြ၊ ပြောကြ၊ ဆိုကြရင်း ဒီထိရပ်တည်နိုင်ခဲ့တဲ့ တော်လှန်ရေး မဟုတ်လား။ ကိုယ်တွေဘက်က ရန်ဖြစ်လို့မက နပန်းပဲ လုံးလုံး၊ MaALoe ဟေ့ဆို မင်းအောင်လှိုင်လို့ တစ်သံတည်း ထွက်ကြမယ့် ပြည်သူတွေ။
စစ်အာဏာရူးစနစ် အပြီးတိုင် ကျဆုံးစေရမယ်။